देउवाको सय दिन , तीन महिना त षड्यन्त्रमा बित्योः डा दीक्षित – SajhaPana
देउवाको सय दिन , तीन महिना त षड्यन्त्रमा बित्योः डा दीक्षित
साझा पाना २०७८ कात्तिक ४ गते ०७:१३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सय दिन पुगेको अवसरमा एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै डा. दिक्षितले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अहिले राजा आउ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ, यसबाट के बुझिन्छ के भने सबै नेता फेल भएको पक्का भयो । आजको दिनमा राजा आउ भन्ने नारा झन झनै बढ्दो छ । शेरबहादुर देउवाको सय दिनमा तीन महिना त षड्यन्त्रमा गयो । देउवाले आफ्नो समय षड्यन्त्रमा बिताउनुभयो । माधव नेपाललाई एमालेबाट फुटाउनुभयो । उहाँ त सति जानुभयो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । माधव नेपाल खेमा फुटाउनेबित्तिकै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो । यो कस्तो षड्यन्त्र हो ? यसले मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर पार्यो ।’
उनले देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा असक्षम नेताको उपाधि पाएको पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अब कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा पनि कसरी सभापति बन्ने भनेर उहाँले तयारी गरिरहुनभएको छ । कांग्रेसमा सक्षम सांसद छन् । तर, उहाँले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुभयो । उहाँ किनबेचमा माहिर हुनुहुन्छ । सरकारको कामको के कुरा गर्नु ? तुईन काण्डमा नेपाल सरकारले भारतसँग एक शब्द पनि बोल्न सकेन । एउटा टिम पठाएर आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरियो, उमेश श्रेष्ठले राम्रो काम गर्नुभएको थियो । तर, तत्काल उहाँलाई त्यो जिम्मेवारीबाट सार्नुभयो । जताबाट हेरेपनि षड्यन्त्रै षड्यन्त्रमा तीन महिना बित्यो ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशबाट शासन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अध्यादेशबाट शासन चलाएपछि लोकतन्त्र नै कच्चा भयो । यो सिस्ष्टम नै काम लागेन । नेताहरु काम लागेनन् । किन देशमा प्रगति भएन ? भ्याक्सिनमा एउटा राम्रो काम भएको थियो ।’
उनले पाँच दलीय गठबन्धन नै असफल भएको दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद अवरुद्ध गरिरहेको तर सदन सुचारु गराउनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल नगरेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘संसद् सुचारु गर्नुपर्छ । सरकार निकम्मा भयो, हुँदाहुँदै अब संसद् पनि निकम्मा भयो । यो सबै स्वार्थको कारण हो ।’
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगो पार्टीको नेता बन्न नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सभापति देउवा सानो गुटमा बसेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उहाँ सानो गुटमा बस्नुभयो, उहाँको सानो ईन्जिन छ, यसले सही ड्राईभ गर्न सक्दैन् । यो समस्या प्रचण्ड र ओलीमा पनि छ।’
नेता भण्डारीले अहिले मुलुकको भूगोलको सुरक्षा गर्न सकेका छौं कि छैनौं ? यो महत्वपूर्ण कुरा भएको पनि सुनाए ।
उनले भने, ‘यसमा पनि हामी चुकेका छौं । आज हाम्रो देश आर्थिक रुपले पछि परेको छ, नेपाली जनताहरुको अहिलेपनि अस्पताल र विद्यालयमा पनि पहुँच छैन् । सरकारी विद्यालयहरु प्रतिष्पर्धी छैनन् । जनताहरु दिन दिनै गरिब बनेका छन, नेताहरुमा देश बनाऔं भन्ने चिन्तन भएन । प्राकृतिक साधन स्रोतले हामी धनी छौं । हाम्रो कमजोरी नै देशलाई हेर्ने राष्ट्रिय एप्रोच नै भएन ।’
उनले नेपालमा कानूनले काम गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘कानूनले व्यक्तिको मुख हेर्दा धेरै गलत गर्नेहरु राजनीतिमा प्रवेश गरे । यो नै ठूलो रोग हो । राजनीतिमा पनि नयाँ पुस्ताले प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । हामीले राष्ट्रलाई हेरेर योजना बनाउन सकेनौं । शेरबहादुर देउवाजीको सय दिनको उपलब्धिको कुरा गर्दा तीन महिनासम्म मन्त्रिमण्डललाई हामीले पूर्णता दिन सकेनौं । सय दिनमा तीन सय जना काम नगर्ने ठेगेदारहरु थुनिनुपर्दथ्यो । क्यान्सर, मिर्गोला र स्पाईनल कडको विरामीलाई पाँच हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो त राम्रो कुरा हो । वर्तमान चूनौति अनुसार नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्न सकेन । नेपालको पोलिटिक्सको डिएनएमा नै खराब छ ।’
उनले हिजो देउवा र गिरिजाबाबुबीच द्धन्द्ध हुँदा देउवाले पार्टी फुटाएको पनि स्मरण गराए । अहिले सदन किन चलेन ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे । भण्डारीले नेपालका कम्युनिष्टहरुमा विद्रोही नेचर भएको सुनाए ।
उनले भने, ‘उहाँहरु सत्तामा जाँदा पनि विद्रोही, बाहिर बस्दापनि विद्रोही, सदनमा पनि विद्रोही । सर्वदलीय बैठकमा एमाले आएन । हिजो देउवाजी त सर्वदलीय बैठकमा जानुभएको थियो त । सदन नचल्नु भनेको दुःखद् कुरा हो । यदि पार्लियामेन्ट चल्न दिईएन भने नेपालको डेमोक्रेसी गुम्नपनि सक्छ। सबै दलका नेता खासगरी दलका नेता बन्न सकेका छैनन् । यी नेताहरुले देश बनाउन सक्दैनन् । यी नेताहरु विदा नहुञ्जेलसम्म देश बन्दैन् । उहाँहरुबाट मुलुक बन्दैन । बरु परिवार बन्ला । कांग्रेसको यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का पार्टी कार्यालयका सचिव, सांसद तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले शेरबहादुर देउवाको सरकारको सय दिनको समिक्षा गर्दा आफूले १०० मा १० नम्बर मात्रै दिने बताए ।
उनले भने, ‘यो सरकारले खासमा ८८ दिनमा मात्रै पूर्णता पायो । अहिले सय दिनभन्दापनि १२ दिनको हिसाब गर्नुपर्ला । यो सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल छ । विकास निर्माणमा पनि फेलियर छ । मित्रराष्ट्रको सम्बन्धको हिसाबले धेरै गतिलो चालामाला देखिएको छैन् । ओली सरकारले बनाएका राजदूतहरु उहाँहरुले फिर्ता बोलाउनुभएको छ । चीनतिर सिमाना विवाद छ भनेर बिच्काईदिनुभएको छ । महाकाली नदीको तुईन प्रकरणमा सरकार एक शब्दपनि बोलेको छैन् । एमसीसीको बारेमा पनि सरकार स्पष्ट छैन् । हरेक फिल्डमा सरकार फेल छ ।’
उनले आफूले कनिकुथो गरेर सरकारको सय दिनको समिक्षामा नम्बर दिनुपर्दा १० नम्बर दिन सक्ने बताए । उनले आफूहरुले सदन अवरुद्ध नगरेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘पार्लियामेन्टमा हिजोको सरकारले ल्याएका विद्येयकहरु ल्याएको थियो । पार्लियामेन्टको पहिलो बैठकमा विद्येयकहरु प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो । हामी त अहिले सामूहिक रुपमा आवाज उठाएका हौं । बरु सदन त सत्तापक्षले अवरोध गरिरहेको छ । जुन तरिकाले एमालेजतिको पहिलो दललाई विभाजन गर्नको लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याईयो, त्यो पनि पार्लियामेन्टको बैठक चल्दाचल्दै हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश यो सरकारले ल्यायो । विभाजनअघि नै हामीले केही सांसद साथीहरुलाई कारबाही गरेका थियौं । तर, कारबाही सदर भएन ।’
उनले सदन सुचारु गर्नको लागि आफूहरु सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी भएर वार्ता गर्न तयार रहेको सुनाए ।
ट्याग : #hot, #देउवा